Iivenkile ezilungileyo zokuthenga iselfowuni ngokukhuselekileyo nangexabiso elifanelekileyo | Iindaba zeGajethi
Eyona venkile ihambileyo
I-smartphone iye yagqitha kunyaka ophelileyo, isixhobo esisetyenziswa kakhulu ngabasebenzisi ukunxibelelana ne-IntanethiNokuba ungabonisana newebhusayithi, uthumele i-imeyile, ujonge iinethiwekhi zethu ... ngenxa yoko ukuthengiswa kwePC kuyaqhubeka ukwehla unyaka nonyaka ngaphandle kokubonisa iimpawu zokubuyela kwimeko yesiqhelo.
Kuba i-smartphone sesona sixhobo sisetyenziselwa ukuqhagamshela kwi-Intanethi, sihlala sifuna ukonwabela esona sixhobo sinexabiso elincitshisiweyo. Kule minyaka mibini idlulileyo, inani elikhulu leewebhusayithi zaseAsia zifike eSpain kwaye zisivumela ukuba sithenge ii-mobiles zaseAsia ngezaphulelo, kodwa akukho lula ukuba zeziphi ezizezona zilungileyo. Ukuphelisa amathandabuzo, apha ngezantsi sikubonisa ukuba ziyintoni iivenkile ezilungileyo ezikwi-Intanethi zokuthenga ii-mobiles.
1 Umgangatho wabenzi bee-smartphone baseAsia
3 Iindlela zokuhlawula
4 Eyona venkile ikwi-Intanethi yokuthenga ii-mobiles ezingabizi kakhulu
4.1 Ukukhanya ebhokisini
4.9 Izixhobo zePC
Umgangatho wabenzi bee-smartphone baseAsia
Iimpawu zamaTshayina ziyathanda Xiaomi, OnePlus, Meizu, Oppo, Vivo, Doogee, ZTE… Ziye zezona zikhetho zibalaseleyo ezikhoyo kwintengiso, zisinika izixhobo ezinomlinganiso wexabiso lomgangatho omangalisayo kumaxesha amaninzi. Nangona sinokufumana iifemu ezinje ngeLeagoo okanye iElephone, abathi ngokuthe ngcembe babe yinto engaphaya kokufanelekileyo kubantu baseAsia abakhulu abakhankanywe apha ngasentla.
Ngaphandle kweXiaomi, ngubani yavula ivenkile ebonakalayo kunye ne-intanethi eSpain kunyaka ophelileyoNangona ikhathalogu yayo isencinci kakhulu, ukuba sifuna ukuthenga itheminali kwezi brand, sinyanzelekile ukuba sibhenele kwiiwebhusayithi ezikwi-intanethi, ikakhulu ezase-Asia, ukuba sifuna ukufumana elona xabiso libalaseleyo kwaye ukuba sinomonde owaneleyo wokulinda ixesha lokuhambisa, ixesha lokuhambisa ngamanye amaxesha lide kakhulu.
Kufuneka sikuthathele ingqalelo oku kunokwenzeka Iirhafu zerhafu, kuba ngamanye amaxesha, kunokwenzeka ukuba ixabiso lokugqibela esilihlawule ngalo itheminali liya kongezwa phakathi kwe-30 ukuya kwi-50 ye-euro emva kokudlula kumasiko. Ngethamsanqa, uninzi lwewebhusayithi ziyasazisa malunga nalo mba, ke ngaphambi kokuthenga singathenga ixabiso lokugqibela ngamaxabiso, ukuba kukho ezinye iiwebhusayithi okanye ngqo eSpain.
Isiqinisekiso sihlala silolunye loloyiko abajongana nabasebenzisi abaninzi, kuba ngamanye amaxesha, Inkonzo inokuba seChina kuphela, esinokuthi sinyanzele ukuba siphinde sithumele umnxeba kwaye silinde iinyanga ezimbalwa de ibuyiselwe kuthi. UXiaomi unenkonzo yezobugcisa eSpain, ngelixa u-Leagoo kunye no-OnePlus, ukunika imizekelo embalwa, banenkonzo yabo yezobuchwephese eYurophu, ke ixesha esinokungabikho ngalo ngaphandle kwefowuni lincitshiswe kakhulu ngaphandle kokuba nengxaki kwisiphelo sethu.
Olunye uloyiko abajamelana nalo abasebenzisi abaninzi xa bethenga iifowuni zexabiso eliphantsi kwi-Intanethi zifunyenwe xa kuziwa hlawula kwi-Intanethi. Uninzi lwewebhusayithi endikubonisa zona kweli nqaku, zisinika ithuba lokuhlawula ngePayPal, eyona ndlela intle yokubhatala ukuba sifuna ukuzola ngalo lonke ixesha, kuba xa kukho nayiphi na ingxaki ngemveliso okanye ngokuhanjiswa, iya kuba yi-PayPal ekhathalela ukusombulula okanye, ukusilela oko, ibuyisele imali kuthi.
Eyona venkile ikwi-Intanethi yokuthenga ii-mobiles ezingabizi kakhulu
Abafana abavela kukuKhanya ebhokisini basinika rhoqo izibonelelo ezizodwa Phakathi kwayo kuhlala kukho isiphelo sendlela yeXiaomi, zombini iimodeli zamva nje, kunye nezo bezisemarikeni kangangexesha elithile kodwa namhlanje zisebenza ngokuchanekileyo kubomi bemihla ngemihla kubasebenzisi abaninzi.
TOMTOP iye yaba ngaphezulu kokunye okusebenzayo ku-Aliexpress onamandla onke, njengokuKhanya ebhokisini, ngenxa yonyuselo oluqhubekayo lokuba ayenzi ii-smartphones zeTshayina kuphela, kodwa ikho nenye imveliso ye-elektroniki. Ewe kunjalo, akufuneki sihendeke kuko konke ukusinika esikunikwayo, ngakumbi iimveliso ezibonakala zintle kwaye zishiya izinto ezininzi ezinqwenelekayo, ngaphandle kokuba siyazi kakuhle into esiyithengayo.
Aliexpress bekuyintsimbi yokuqala Iiwebhusayithi zokuqala zaseAsia zaziswa eSpain kwaye esivumela ukuba sithenge iiselfowuni kwiimveliso zaseAsia ngamaxabiso afanelekileyo. Ixesha eliqhelekileyo lokuhambisa lihlala inyanga enye kwaye ngamanye amaxesha, xa sidlula kumasiko sinezimanga ezingathandekiyo xa kuziswa ishifti, i-DHL kwiimeko ezininzi, isilumkisa ukuba kufuneka silungiselele ngaphezulu ukuze sikwazi ukubamba iphakheji iqulethe i-smartphone yethu entsha kraca. Ukuba ujonga i-Xiaomi terminal ngexabiso elifanelekileyo, i-Aliexpress phantse yeyona ilungileyo, nangona kusoloko kufuneka sithelekise amaxabiso nezinye iiwebhusayithi, kwimeko apho sinokufumana isithembiso esithile.
Banggood ubeka ezandleni zethu inani elikhulu lokunikezelwa, phantse yonke imihla ngomnxeba, ke ukuba siyanyanzelwa ukuba sihlaziye ngokukhawuleza i-smartphone yethu ngaphandle kokulinda nasiphi na isibonelelo, kwaye ixesha lokuhambisa lincinci, le webhusayithi inokuba yeyona siyifunayo.
Enye yee-greats kule minyaka idlulileyo ibe sisalathiso kwicandelo levenkile ekwi-intanethi yaseAsia. IGearbest isinika ixesha elinikezelweyo ngamaxabiso amangalisayo, ukunikezelwa kwetheminali entsha, kwaye sinokufumana phantse nayiphi na imveliso ye-elektroniki ethi qatha engqondweni.
uGogo Yenye yezona zinto zikhulu ezithe zenzeka kancinci kancinci zisenza umsantsa phakathi kweewebhusayithi ezikwi-Intanethi ezikwi-intanethi ezikhoyo ngoku kwintengiso. IGogo isinika eyona nto inomtsalane kuyo, ukongeza kumaxabiso ayo aphezulu aboniswe kwii-euro, kuthintelwe ukuba kufuneka sitshintshisane ngemali, azisokuze zilungelelane nenyani, Uninzi lweemveliso zinokuhanjiswa simahla, ke akukho mfuneko yokuba songeze kwixabiso lokugqibela eliboniswa yimveliso.
Asikwazanga ukuyeka ukukhankanya intengiso enkulu kwi-intanethi Kolu luhlu, nangona endaweni yokufumana izibonelelo kwiimpawu zaseAsia, siya kufumana izibonelelo ezinomdla kwezona zinto zithengiswa kakhulu, kwaye ezinye azithandwa kangako. IAmazon yenza ukunikezelwa okukhethekileyo kubasebenzisi yonke imihla, ezinye zazo ixesha elincinci okanye ubuncinci, ke ukuba ufuna iselfowuni kwaye awunakulinda malunga nenyanga ukuze ukwazi ukuyikhupha, iAmazon yenye Olona khetho lubalaseleyo lokuthenga iifowuni eziphathwayo nge-Intanethi kwaye apha ungabona izibonelelo zabo
Kananjalo ayinakuba ilahlekile EBay kolu luhlu. Olona ncedo luphambili lokuba i-eBay ihlala isinika xa kuthelekiswa neewebhusayithi zaseTshayina endizikhankanyileyo ngasentla, yile Ixesha lokuhambisa linqunyulwe kwisiqingatha, ukuba kwiimeko ezininzi iintsuku ezili-15 ukuba sithenga iimveliso e-China. Kodwa ukuba sijonga ii-mobiles ezihlala zithengiswa eSpain naseYurophu, i-eBay ikwalilo iqonga elifanelekileyo lokufumana okunikezelwayo kolu hlobo, njengeAmazon.
Izixhobo zePC Kwiminyaka yakutshanje ibe yenye yezona ndlela zibalaseleyo zokuthenga iimveliso zeTshayina ngexabiso elifanelekileyo. Ukongeza, ukuba yinkampani yaseSpain, ukuba sinengxaki nesiphelo, baya kuba ngabaphathi babo lawula ukulungiswa okanye ukutshintshwa ukuba ityala livela.
Phakathi kweempawu ezisebenza kunye nePcComponentes kwihlabathi lefowuni esilifumanayo Iapile, Samsung, Xiaomi, BQ, Imbeko, ZTE, Elephone, Meizu… Kwakhona, enkosi kwiinjini yokukhangela ye-smartphone, sinokufumana i-smartphone kunye nebhetri, ikhamera, umbala, ukugcinwa kunye nayo nayiphi na into esiyifunayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Eyona venkile ihambileyo
Isamsung yazisa ukuqala kwemveliso ye-GDDR6 RAM yokuqala kwintengiso